Sawirada Dumarka ee ku dhaganaa Wadooyinka Kabul oo la Fiiqay
HomeWararka CaalamkaSawirada Dumarka ee ku dhaganaa Wadooyinka Kabul oo la Fiiqay
Sawirada dumarka ayaa laga tirtiray Kabul, taas oo calaamad u ah wajiga caasimadda Afgaanistaan ​​oo si xawli ah isu beddelaya maalmo tan iyo markii ay Taliban qabsadeen.
Dagaalyahannada nidaamka cusub ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Axaddii ka dib weerar fudud ay kaga saareen dowladdii hore ee dalka ka jirtay.
Horumarka waxaa ka soo baxay oo keliya welwelka ku soo kordhay aagagga aan weli gacantooda ku jirin, oo reer Afgaanistaan ​​ay ka baqayaan in lagu celiyo falkii foosha xumaa ee haweenka lagula kacay xilligii ugu dambeeyay ee talibanka.
Labaatankii sano ee ka dambeeyay duullaankii uu hoggaaminayey Mareykanka ee xukunka looga tuuray 2001-dii, waxaa dib u soo laabatay xuriyada haweenka.
magaalooyin kale oo wadanka ayaa laga bilaabay in darbiyada laga tirtiro sawirka haweenka ee xayisiimaha.